40 Qaboojiye "Hoos Ka Dhis" Template | Abuurista khadka tooska ah
Markii aan horumarinayno degel waa dhaqan fiican in la dhigo bog "Dhismaha ka hooseeya" si martidu u ogaato in websaydh la samaynayo oo aanu boggu ka tegi doonin.
Taasi waa sababta suuqa template ee aaggan sidoo kale wax badan u dhaqaaqo, iyadoo qiimaha si macquul ah uga hooseeya qaababka hadda jira, taas oo dusheeda ka dhigaysa mid ku dhow lagama maarmaan in la helo mid ka mid ah kuwa marka aan sameyno degel.
Waan ka tagayaa boodka ka dib, dhammaantood way fiican yihiin.
1.2 2. Waxaan ku jirnaa fasax / Dhisme ayaa socda - $ 7
1.3 3. Bogga Dhismaha - $ 10
1.4 4. Hoosta Dhismaha foomka xiriirka w / AJAX - $ 8
1.6 6. Imaatinka Mar dhow Dhisme 01 - $ 6
1.7 7. Goor dhow Fudud oo lasoco shaxda goos gooska - $ 8
1.9 9. Imaatinka Mar dhow Dhisme 03 - $ 8
1.10 10. Imaatinka Mar dhow Dhisme 02 - $ 8
1.11 11. Horizon cusub - $ 7
1.12 12. Nadiifinta Tirinta Muddada / Bogga Dhismaha - $ 7
1.14 14. OgeysiisMe - $ 6
1.15 15. Dhismo - $ 7
2.1 16. WordPress Plugin - Custom Imaatinka Dhawaan Bogagga - Bilaash
2.2 17. Bogga Dhismaha hoostiisa oo leh garaaf twitter & pie ah! - $ 8
2.3 18. Hurdo badan - $ 8
2.4 19. Daahfurka - $ 8
2.5 20. Dhismooyinka Xaddidan ee Dhismaha - Bilaash
2.6 21. Tempskin - Bilaash
2.7 22. Ready2Launch - Bilaash
2.8 23. LaunchPad - Bilaash
2.9 24. WP Blueprint - Bilaash
2.10 25. WP Launcher - Bilaash
2.11 26. Baraf Jabiyaha - Bilaash
2.12 27. Imaatinka Dhawaan WordPress Theme - Bilaash
3.1 28. Qaab dhismeedka casriga ah ee casriga ah - Bilaash
3.2 29. Qaab Dhismeedka Lacagta Qaata ee Lacagta - Premium
3.3 30. Tusaalooyinka Dhismaha - $ 4
3.4 31. Slick Shaxda Bogga Dhismaha - $ 5
3.5 32. Slick 404 & Pages Pages under - $ 4
3.6 33. Xirmooyinka Dhismaha - $ 6
4.1 34. 3D Janjeer Goor dhow la imanaya tirinta saacadda - $ 12
4.2 35. Riwaayad Goordhow La Socota Tirinta iyo astaanta! - $ 5
4.3 36. Hoos waxaa kuqoran Bog Dhismo leh Tirin, Twitter, & Saxiix Wargeys - $ 17
4.4 37. Goor dhow Mini Template 02 - $ 12
4.6 39. Imaatinka Dhawaan Animation V3 Micro Site Bogga - $ 7
4.7 40. Sapling - Bilaash
Vinta SS waa hal bog oo fudud oo ah “Dhismaha hoostiisa” oo kuu oggolaanaya inaad kula socodsiiso isticmaaleyaashaada intaad dhiseyso degel cusub. Naqshaddan html waxay kuu oggolaaneysaa inaad si deg deg ah oo fudud u sameysato bog degitaan degmo cusub ama mashruuc websaydh ah oo u sheegaya martida waxa socda iyo goorta la dhammaystirayo goobta.
2. Waxaan ku jirnaa fasax / Dhisme ayaa socda - $ 7
Xiriir | Demo
Kani waa bogga dhismaha oo qaadanaya shakhsiyaadka milkiilayaasha websaydhka ee fasaxa tagaya, markaa kaadhka boostada. Waxay la timaaddaa faylasha PSD, Xhtml sax ah, nooc flash ah, iyo qoraal xisaabeed fudud.
3. Hoosta Bogga Dhismaha - $ 10
Template-kan ayaa ah mid fudud oo ka hooseeya dhismaha oo qofkasta u isticmaali karo degelkiisa inta lagu gudajiro dhismaha websaydhkiisa Jaantusku wuxuu adeegsadaa saacad-xisaabinta Jquery, oo ay ku jiraan foomka Ajax ee loogu talagalay saxiixyada warsidayaasha, iyo qoraalka si fudud loo beddeli karo iyo faahfaahinta xiriirka.
4. Hoosta Dhismaha foomka xiriirka w / AJAX - $ 8
Bogga Dayactirka ee SolidForm waa bog "Customerable" ah oo la dhisi karo. Way fududahay in la habeeyo oo la yimaado waxyaabo sida bar horumarka iyo waxa aan ku shaqeyneyno qoraalka, foomka xiriirka Ajax oo dhameystiran, tweets-kii ugu dambeeyay, iyo qorshooyin midab badan leh
Neoteric waa bog nadiif ah oo hal bog ah oo ah “Dhismaha / Imaatinka Dhawaan” shaxanka 10 MAQAARO oo loogu talagalay inay kula socoto adeegsadayaashaada horumarka bartaada. Waxay la imaaneysaa 3 PSD, foom ansax ah oo shaqeynaya, qoraalka tirinta Jquery iyo jaantuska gooraha, iyo sidoo kale bedelka xarfaha 'Cufon' ee muuqaal dhab ah oo cajiib ah.
6. Imaatinka Mar dhow Dhisme 01 - $ 6
Kani waa meherad jilicsan oo si fudud loo isticmaali karo oo loogu talagalay boggaaga. Astaantu way fududahay inaad iska bedesho taada oo aad dejiso waqtiga tirinta ayaa ah neecaw. Waxaa jira laba hargood oo kala duwan oo ay ku jiraan, mid madow iyo caddaan. Qalabayn deg deg ah oo fudud, waxaad kuheli kartaa barta internetka khadkaaga daqiiqado kadib iibsiga. Fiiro u yeelo foomka soo gudbinta PHP ee shaqeynaya oo leh autoresponder adeegsada ajax (ma bixi doono bogga marka farriinta la diro, kaliya muuji farriin guuleysi ah haddii wax waliba si fiican u socdaan)
7. Fudud Oo Dhawaan La Soconaya Shaxda - $ 8
Imaatinka Sahlan ee Dhawaan waa bog fudud oo dabacsan oo hoosta ka dhisaya kaas oo si fudud kuu oggolaan doona inaad qeexdo websaydhkaaga soo socda oo aad metesho heerka ay hadda ku sugan tahay, oo ay taageerto muuqaal quruxsan oo si fudud loo beddeli karo, iyo foomka liiska waraaqaha ee Ajax si ay martidaadu u cusbooneysiiyaan. Waxay ku timaadaa 7 qorshe midab madow ah, iyo 3 qorshe nal.
Ethereal - Dhismaha hoostiisa waa bog nadiif ah oo halbeeg ah "Dhismaha Hoostiisa", oo loogu talagalay in lagu ilaaliyo adeegsadayaashaadu inay la socdaan horumarka boggaaga. Waxay la timid 5 qorshe midab leh; Buluug, Madoow, Dhexdhexaad, Casaan iyo Casaan. Noocyada waxaa ka mid ah PSD la jarjaray, foomka Ajax / Php shaqeynaya, qoraalka xisaabinta Jquery, baarka horumarka, iyo dukumiintiyo ballaaran.
9. Imaatinka Mar dhow Dhisme 03 - $ 8
Kani waa sasabasho iyo fududaan loo isticmaalo meelaynta boggaaga. Astaantu way fududahay inaad iska bedesho taada oo aad dejiso saacadaha tirinta iyo sidoo kale barta horumarka waa neecaw. Baarka horumarka ayaa si otomaatig ah u xisaabin kara (ka dib markaad geliso bilowga iyo dhammaadka taariikhaha) boqolleyda la dhammaystiray ama aad adigu iskood u adag kartid boqolleyda adigu. Waxaa jira afar maqaar oo kala duwan oo ay ku jiraan: Madow, Buluug, Gaar ah iyo sidoo kale maqaar cad oo nadiif ah oo nadiif ah oo loogu talagalay dadka aan dooneynin sawirro badan. Qalabayn deg deg ah oo fudud, waxaad kuheli kartaa barta internetka khadkaaga daqiiqado kadib iibsiga. Fiiro u yeelo foomka soo gudbinta PHP ee shaqeynaya oo leh autoresponder adeegsada ajax (ma bixi doono bogga marka farriinta la diro, kaliya muuji farriin guuleysi ah haddii wax waliba si fiican u socdaan)
10. Imaatinka Mar dhow Dhisme 02 - $ 8
Kani waa sasabasho iyo fududaan loo isticmaalo meelaynta boggaaga. Astaantu way fududahay inaad iska bedesho taada oo aad dejiso saacadaha tirinta iyo sidoo kale barta horumarka waa neecaw. Baarka horumarka ayaa si otomaatig ah u xisaabin kara (ka dib markaad geliso taariikhda bilowga iyo dhammaadka) boqolkiiba la dhammaystiray ama aad adigu iskood u adag kartid boqolkiiba intaad iska leedahay. Waxaa jira afar maqaar oo kala duwan oo ay ku jiraan, midabbo badan oo mugdi ah iyo maqaar buluug ah "baraf", maqaarka aurora cad iyo sidoo kale maqaar cad oo nadiif ah oo loogu talagalay dadka aan dooneynin sawirro badan. Qalabayn deg deg ah oo fudud, waxaad kuheli kartaa barta internetka khadkaaga daqiiqado kadib iibsiga. Template-ka waxaa ku jira dhammaan feylasha bogga .psd oo leh xaleefyo waana inuu ahaadaa mid sahlan oo loo habeeyo aqoonta dhexdhexaadka ah ee Photoshop iyo CSS.
11. Horizons New - $ 7
Horizons Cusub Dhismaha bogga ayaa ah xalka ugu fiican ee goob kasta oo hadda dhismaheedu socdo. Bixi sharraxaad faahfaahsan oo ku saabsan waxa xaaladdaadu hadda tahay, boqolkiiba dhammaystiran iyo sidoo kale taariikhda sii-daynta la filayo. Bar horumarka iyo tirinta waa firfircoonaan iyo caado loo qoray si loo hubiyo dejinta fudud ee fudud ee taariikhaha bilowga iyo dhamaadka. Waxaa lagu heli karaa 4 qaabab midab qurux badan oo qurux badan isla markaana si fudud wax badan loo abuuri karo!
12. Nadiifinta tirinta Saacadda / Bogga Dhismaha - $ 7
Kani waa shay nadiif ah oo casri ah "dhowaan soo socda" / "dhisme" template. Waxay muujineysaa maalmo, saacado, daqiiqado iyo ilbiriqsiyo u haray dhacdo gaar ah. Tus hoygaaga horumarka bar waxqabadka oo ku siiso isticmaale-celinta ra'yi ku saabsan horumarka la sameeyay. Faylka waxaa ku jira nooc aasaasi ah oo ka kooban lix midab oo kala duwan iyo sidoo kale laba nooc oo gunno ah iyo nooc dhalaalaya oo saddex midab leh.
Mawduuc cusub oo loogu talagalay Bogga Dhismaha hoostiisa oo leh 'Styled CountDown Twitter Support' iyo Foomka rukunka Ajax. Waxaa lagu heli karaa 4 Kala Duwanaansho Midab ah. Astaamaha waxaa ka mid ah Valid xHTML iyo CSS, Jackery counter timer oo qaabeysan, isdhexgalka twitter, foomka rukunka emailka Ajax / Php oo la jaan qaada dhammaan daalacayaasha.
14. OgeysiisMe - $ 6
"NotifyMe" waa degel bog aad u fudud ah. Waxay ku timaaddaa hal fayl HTML ah, hal feyl oo CSS ah, sawirro qaar ah iyo faylka faylka PSD oo si buuxda loo jarjaray. Waxaa loo qaabeeyay mid ka mid ah kuwan “ii soo sheeg marka la dhammeeyo” microsites maskaxda ku haya. Tusaale ahaan barnaamij cusub oo iPhone ah, qalab web, degel iwm. Laakiin isbeddelada qaarkood waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa bog yar oo faylalka ka shaqeeya ah, 404 bog qalad ah ama degel kasta oo kale oo yar oo taagan.
15. Dhismo - $ 7
Dhismaha waa shay cusub oo cusub oo leh 6 Kala duwanaansho Midab iyo naqshad casri ah oo nadiif ah. Waxay ku timaaddaa saacad-xisaabinta tirinta Jquery oo si fudud loo habeyn karo, bar horumar quruxsan oo quruxsan, iyo PSD-da si wanaagsan u abaabulan. Waxaas oo dhan waxaa la socda dukumiintiyo si wanaagsan loo qoray, iyo foomka soo gudbinta ah "I socodsii".
16. WordPress Plugin - Bogagga Imaatinka Dhawaan - Free
Custom Coming Soon Pages WordPress Plugin wuxuu kuu ogolaanayaa inaad soo bandhigto a Customing Coming Soon Page ama Dhismaha hoostiisa bogga martida caadiga ah ama xubnaha joogtada ah ee shabakadaada ku saleysan WordPress ama Blog - halka Maamulayaasha Boggu ay u arkaan bogga si buuxda u shaqeynaya oo leh mawduuca la adeegsaday iyo plugins firfircoon sida iyo sidoo kale Dashboard si buuxda u shaqeynaya. Custom Coming Soon Pages WordPress Plugin ayaa awood kuu siinaya inaad sameyso casriyeyn, hagaajin cilladaha xunxun ama horay u sii eegista jazzy ee naqshadeyntaada si toos ah boggaaga ku saleysan WordPress ama blog adigoon u oggolaan isticmaaleyaashaada iyo dadka soo booqda ee caadiga ah inay arkaan farriimaha qaladka qaladka ah ama isbeddelada naqshada illaa aad run ahaantii iyaga rabto.
17. Bogga Dhismaha hoostiisa oo leh garaaf twitter & pie ah! - $ 8
Hubso in dadka ku soo booqda ay ogyihiin waxa ku socda shaxdan Dhismaha dhismaha hoostiisa oo ka kooban quudinta tweets-kaaga ugu dambeeyay (kaas oo si fudud looga saari karo haddii aadan isticmaalin twitter-ka) iyo jaantus goos goos ah oo si fudud wax looga beddelayo si loo muujiyo horumarkaaga! Xitaa wuxuu la yimaadaa nooca Wordpress, iyo sidoo kale html!
18. Hurdo badan - $ 8
Template-ka 'Model' ee ka hooseeya dhismaha wuxuu la yimaadaa oo keliya nooc html ah, laakiin nooca 'free wordpress' sidoo kale! 5 Nidaamyada midabbada ayaa la heli karaa, oo leh astaamo ay ku jiraan PSD-da si wanaagsan loo diiwaangeliyey, is-dhexgalka twitter-ka, qoraalka tirinta, foomka xiriirka shaqada, iyo foomka ku-qoridda warsideyaasha.
19. Daahfurka - $ 8
LaunchIt waa "Qaab Dhismeedka Qaab Dhismeedka" oo ay dhiirrigelisay websaydhka fudud ee fudud ee Apple. Template-ka waa fududahay in wax laga beddelo wuxuuna la yimaadaa 2 nooc, madow iyo caddaan; mid kasta oo ka mid ah wuxuu leeyahay 4 midab (buluug, casaan, cagaar & casaan). Markaad iibsanaysid shaxdan waxaad helaysaa qiime 3 ah 1. Waxaad ka heli Joomla iyo nooca WordPress ah ee template ahaan gunno ahaan. Astaamaha waxaa ka mid ah IE6 Browser Check, Countdown, a Ajax Form with Validation, a Flash Image Rotator and Twitter Updates.
20. Dhismooyinka Xad-dhaafka ah ee Dhismayaashu socdaan - Free
Template-kan ayaa ah hal bog oo fudud "Dhismaha hoostiisa" Mawduuca WordPress. Waxay leedahay interface fiican iyo guddi maamul oo weyn. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad la socodsiiso isticmaaleyaashaada, inta aad ka shaqeyneyso websaydhkaaga cusub ee WordPress. Template-ka wuxuu leeyahay slider jQuery ah oo ay kujiraan 3 isbaaro: mid leh bogagaaga bulshada sida Twitter ama Facebook, mid leh foom isdiiwaan galin ah (wuxuu lashaqeeyaa kaliya Feedburner) iyo mid kale oo leh aag lagu qoro waxaad sameyneyso.
21. Maqaarka jirka - Free
Tempskin waa mid aad ufudud ku hoos jira mowduuca dhismaha ee WordPress. Waxay la timid asal wanaagsan oo raadinaya, oo ay weheliso RSS, ka-qorista emaylka iyo is-dhexgalka twitter-ka. In kasta oo ay fududahay, waxay ku qabataa shaqada iyada oo aan dhibaato kale la helin.
22. Ready2Lunch - Free
Ready2Launch waa bilaash shaxanka Dhismaha ee loo isticmaali karo mawduuca WordPress, oo leh bogga xulashooyinka maamul ee loogu talagalay, ama sida HTML / CSS bogga fudud. Waxaa ku jira 6 mawduucyo iyo qoraalo ku saabsan qaabeynta. Waxay ku timaaddaa saacad-tirinta JS, iyo diyaar u ah adeegsiga foomka boostada.
23. LaunchPad - Free
Fasallada LaunchPad lafteedu waa mawduuc baarkinka la dhigto, laakiin asal ahaan waxay la mid tahay dhammaan kuwa kale ee ku hoos jira mowduucyada dhismaha. Fududeynteedu waa sahlan tahay. Waxay sheegaysaa in degelku aanu weli diyaar ahayn, oo u oggolaanaya adeegsadaha inuu ku biiro wixii cusbooneysiin ah adoo adeegsanaya RSS, ama liistada liiska. Waxay u timid labada WordPress, iyo Drupal.
24. WP Blueprint - Bilaash
Qaabka loo yaqaan 'Blueprint' wuxuu la yimaadaa dareen soo jeedin fantastik ah, isagoo si cad u sheegaya in goobta aysan weli diyaar ahayn Waxay ku timaaddaa tirinta, Feedburner iyo is-dhexgalka Twitter, bogga xulashada mawduuca, waxayna ka shaqaysaa dhammaan daalacashada waaweyn ee leh XHtml ansax ah.
25. Soo -saaraha WP - Free
WP Launcher waa mawduuc bilaash ah oo WordPress ah oo leh ujeedo keliya: si loo bixiyo soo jiidasho leh, la habeyn karo mawduuc dhigashada baarkinka loogu talagalay dadka isticmaala WordPress. Mawduucani waa xal weyn oo loogu talagalay isticmaaleyaasha WordPress ee horey u lahaa boggooda ama mustaqbalka mustaqbalka, laakiin aan weli diyaar u ahayn in boggooda uu si toos ah u noolaado. Waxay bixisaa foom saxiix ah (oo ay ku shaqeyso Google Feedburner) oo loogu talagalay dadka soo booqanaya inay isdiiwaan geliyaan si ay u helaan cusbooneysiin ku saabsan bogga Waxay ku imaaneysaa guddi ikhtiyaarro ah oo gadaal-dhammaad ah oo aad ku habeyn karto quudinta Rss, Twitter, Diiwaangelinta Bulshada, Taariikhda bilaabista oo ay ku jirto tirinta saacadda, Boqolkiiba Dhammaystiran iyo waxyaabo kaloo badan.
26. Barafleyda Barafka - Free
Ice Breaker waa mawduuc barta baabuurta la dhigto oo bilaash ah oo loogu talagalay WordPress oo leh afar nidaam midab oo kala duwan, iyo qaabeyn fudud oo loo maro widget-yada gaarka ah iyo bogga xulashada mawduuca. Mawduucan, oo ay weheliso WordPress iyo koontada FeedBurner, waxaad heli kartaa bog soojiidasho soo jiidasho leh oo aad ku soo ururiso macaamiisha iyo kuwa raacsan Twitter intaad ka heleyso balooggaaga.
27. Goordhow La Soco Mawduuca WordPress - Free
Mawduucan dhowaan soo socdaa ma sahlana inuu la xiriiro websaydhkaaga. Waxay noqon kartaa imaatinka ugu dhakhsaha badan ee shey, codsi, ama gabal software! Waad u adeegsan kartaa inaad ku dhisto liiska macaamiisha xiisaha leh foomka ku-qornaanta ee Feedburner, waxaadna ugu habayn kartaa baahiyahaaga adoo adeegsanaya muuqaal asal ah oo aad u kala jaad ah, iyo xulista midabka qoraalka.
28. Qaabka Casriga ah ee Dhismaha - Free
Kani waa PSD oo kaliya Qaabdhismeedka Dhismaha, oo leh PSD si habeysan loo abaabulay iyo awood u leh inuu si fudud u abuuro nidaamka midabkaaga. Waxay ka kooban tahay meel loogu talagalay isdiiwaangelinta warside, astaamaha bulshada, iyo sidoo kale qolka loogu talagalay cusbooneysiin kooban oo ku saabsan halka horumarka barta hadda ku sugan tahay. Wax kasta oo aad u baahan tahay!
29. Qaabka Hoose ee Dhismaha - Free
Faylashaan PSD kaliya ee ay soo saartay Design3Edge waa qaabab casri ah, qaabab fudud oo ka hooseeya boggaga dhismaha, oo leh 4 qaabab midabbo kala duwan ah. Waxyaabaha loo qorsheeyay waxaa ka mid ah quudinta twitter-ka, saacad tirinta, isku dhafka badhanka bulshada, iyo RSS feed.
30. Ku hoos jira Qaabdhismeedka Dhismaha - $ 4
Moodhadhkan "ku jira dhismaha" waa kuwo aad u fiican in lagu dhawaaqo boggaaga cusub ama goorta dayactirka lagu jiro. Soo dejintu waxay ka kooban tahay 2 PSD, mid walbana wuxuu ka kooban yahay 4 tilmaan oo 4 nooc oo midabbo kala duwan leh, oo leh lakabyo qoraal oo wax laga beddeli karo si aad macluumaadka ugu beddesho midkaaga. Tirada sawirradu waa 920 × 695 px taas oo ku fiican websaydh kasta.
31. Slick Shaxda Bogga Dhismaha - $ 5
Naqshaddan waxaa loo abuuray sidii tusaale loogu talagalay boggaga dhismaha ka socda, oo leh meel lagu qoro magacaaga bogga, hal ku dhig, cusboonaysiinta Twitter-ka, ku-qoritaanka wargeysyada, hoos u dhig, xiriiriyeyaasha warbaahinta bulshada, qaab jilicsan oo aad u yar. 3 Qorshayaasha midabka ayaa lagu daray (Indian Pink, Eclipse Blue iyo Aloe Green), iyo dhammaan PSD-du waxay u yimaadeen lakabyo iyo habeyn wanaagsan, iyadoo lakabyada qoraalka wax laga beddeli karaa ay fudud yihiin dib-u-midabaynta. Waxaa lagu abuuray nidaamka shabakadda ee 960 si loo sameeyo koodh fudud.
32. Slick 404 & Bogagga Dhismaha - $ 4
Soo degsadani waxay ka kooban tahay bogag casri ah, nadiif ah & xirfadle raadinaya 404 & Under Construction oo leh sooyaal caadooyin badan. Waxay la imaaneysaa faylasha PSD-ga oo si buuxda u diyaarsan kuwaas oo si wanaagsan loo abaabulay oo si fudud wax looga beddeli karo.
33. Hoosta Xirmada Dhismaha - $ 6
Xirmadaani waxay la socotaa 4 ka mid ah nashqadaha dhismaha; 2 Sanduuqa gudihiisa, iyo 2 Caadi ah. Waxaa loogu magac daray 'Weli sawir', 'Digniin - pixels Wet', 'Tropical online soon', iyo '3D Cubes'. Waxay ka dhigayaan fikradda ah deg deg deg deg deg deg ah oo muuqaal ahaan u xiiso badan. PSD's waa lakab waxaana lagu soo koobay tifaftirka fudud.
34. 3D Janjeeri Goor Dhow La Imaanaya Waqtiga Tirinta - $ 12
Kani waa degel deg deg ah 3D-boos-haysta ama mini-site loogu talagalay kuwa aan haysan soo bandhig macluumaad badan. Asal ahaan waa kaar ganacsi oo laba dhinac ah oo aad ku beddeli karto waxyaabaha ku jira. Waad beddeli kartaa sawirrada asalka ah ee labada dhinacba oo aad awood u siin kartaa / aad u joojin kartaa oo aad dib ugu dhigi kartaa saacad tirinta hoos-u-dhigga ah si madax-bannaan dhinac kasta iyo sidoo kale beddeli kara dhammaan midabbada, taariikhda bartilmaameedka, iwm. Waad beddeli kartaa (ama xitaa gab kartaa) guryaha leexashada 3D, u oggolaan kartaa ama diidi kartaa rogista kaarka (ka dhig hal dhinac). Mawduucu waa runtii weji qabow oo dhakhso leh oo soo socda oo loogu talagalay boggaaga oo hubaal ah inuu ku qanacsan yahay macaamiishaada waana mid aad u fudud in la isticmaalo lana hirgeliyo.
35. Dhawaan Animation Iyadoo Tirinta iyo logo! - $ 5
Qaab-dhismeedka tooshku wuxuu dib-u-dhiskaaga dib ugula noqonayaa mid fudud xagga ficil ahaanta oo leh astaan ​​fudud iyo saacad tirinta, laakiin marka la eego jilicsanaanta, way fiicantahay, oo leh animations qurux badan oo mudan in la hubiyo.
36. Hoos kadhagayso Bog Dhismeedka leh Tirin, Twitter, & Saxiix Wargeys - $ 17
Sababtoo ah boggaagu weli diyaar ma aha macnaheedu maahan in boggaagu aanu kuu shaqeyn karin. Intaad ka shaqeyneyso sidii aad kor ugu qaadi lahayd bogga dhabta ah ha u ogolaado boggan ku-meel-gaarka ah inuu abuuro xiise isla markaana ogeysiiyo isticmaalayaashaada mustaqbalka Waxaa jira 4 qaybood oo waaweyn oo kara, laakiin dhammaantood uma baahna in la isticmaalo. Waxaad sidoo kale ku ridi kartaa amar kasta oo aad jeceshahay. Kuwaas waxaa ka mid ah Waqtiga Tirinta, Muuqaalka Muuqaalka ee Twitter, foomka isdiiwaangelinta Wargeys, iyo ugu dambeyn aagga qoraalka.
37. Imaatinka Goor-dhaw Mini Template 02 - $ 12
Kani waa sheybaar meeleysiye degel websaydh ah, kaas oo xml la wado waana la qiyaasi karaa. Waxay leedahay laba qaybood oo aasaasi ah: qaybta ku saabsan moduleka oo leh sharaxaadda html iyo qayb xiriir ah oo ay dadku kula soo xiriiri karaan. Naqshadayntu waa nadiif oo midabada si fudud ayaa loo qaabeyn karaa taas oo sahlaysa in la dhexgalo aqoonsigaaga astaanta. Waa xalka ugu fiican ee dadka loo ogeysiiyo joogitaankaaga internetka kahor intaadan sii deyn boggaaga.
38. XML Coming Soon Vector Template - $ 10
Kani waa runtii qaab fudud oo aad u qurux badan oo imanaya Goor dhow boggagaaga kaas oo hubaal ah inuu qof walba cajabinayo oo ay fududahay in la hirgaliyo. Template-kan ayaa ah 100% vector oo macnaheedu yahay inaad qiyaasi karto oo aad midabka si fudud u beddeli karto. Foomka Diiwaangelinta ayaa sidoo kale lagu daray si aad marwalba ugu cusbooneysiiso booqdahaaga / macmiilka horumarka goobta. Inta badan dejimaha waxaa laga dejin karaa Faylasha XML iyadoon xitaa la furin faylka FLA.
39. Imaatinka Dhawaan Animation V3 Micro Site Bogga - $ 7
Kani waa nooca 2 ee mawduuc flash-ka hore ka mid ahaa oo ay kujireen saameyn la mid ah filashadda astaanta oo ah mid qurux badan. Markan inkasta oo, halkii laga ahaan lahaa mid aad u fudud oo kaliya saacad tirinta, xoogaa dadaal dheeri ah ayaa la galay si loogu daro qolka cinwaanka emaylkaaga, waqtiga tirinta, iyo astaamaha isku xirka bulshada.
40. sapling - Free
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » 40 Qaboojiye "Dhismaha hoostiisa"
xayeysiiska internetka dijo
Aad u xiiso badan qoraalka
Kajawaab xayeysiiska internetka